China Sodium Bicarbonate Kugadzira uye Fekitori | Musoro
Mazita anoreva zvakafanana: Kubika Soda, Sodium Bicarbonate, sodium acid carbonate
Kemikari fomula: NaHCO₃
Kurema kweMloecular: 84.01
Nzvimbo yakanyunguduka: 270 ℃
Nzvimbo yekubikira: 851 ℃
Solubility: Inonyungudika mumvura, isina insoluble mu ethanol
Kuwandisa: 2.16 g / cm
Chitarisiko: chena kristaro, kana opacity monoclinic sekristaro
Rudzi rwebhizinesi: Mugadziri / Fekitori & Kambani yekutengesa
Main Chigadzirwa: Magnesium Chloride Calcium Chloride, Barium Chloride,
Nhamba Yevashandi: 150
Gore rekugadziriswa: 2006
Nzvimbo: Shandong, China (Mainland)
Kristaro chena, kana opaque monoclinic crystal yakanakisa kristaro, isina hunhu, ine munyu, yakanyungudika mumvura, isina insoluble mune ethanol. Iyo solubility mumvura iri 7.8g (18℃) uye 16.0g (60℃).
Iyo yakagadzikana mukushisa kwese uye nyore kuora kana yaipisa. Inoora nekukurumidza pa50℃ uye inorasikirwa zvachose ne carbon dioxide pa 270℃. Iyo haina shanduko mumhepo yakaoma uye inononoka kuora mumhepo ine hunyoro.Inogona kuita nezvose zviri zviviri acids uye zvigadziko. Inopindirana neacids kugadzira inowirirana munyu, mvura uye kabhoni dhayokisaidhi, uye inopindirana nemabhesi kugadzira inowirirana carbonates nemvura. uye carbon dioxide.
ZVIRI MUKATI (SaNaHCO3 %)
CHIITI CHETE (Pb%)
1）Gasi chikamu kabhoni
Iyo sodium carbonate solution inogadziriswa kuburikidza ne carbon dioxide mu carbonization tower, uye ndokuzopatsanurwa, kuomeswa nekupwanywa, uye chigadzirwa chakapedzwa chinowanikwa.
2)Gasi yakasimba chikamu kabhoni
Iyo sodium carbonate inoiswa pamubhedha wekuita, wakasanganiswa nemvura, wakafema kabhoni dhayokisaidhi kubva muchikamu chezasi, yakaomeswa uye yakapwanywa mushure mekabhoni, uye chigadzirwa chakapedzwa chinowanikwa.
1, Pharmaceutical indasitiri
Sodium bicarbonate inogona kushandiswa zvakananga senge mbishi muindasitiri yemishonga yekurapa gastric acid yakawandisa; inoshandiswa sezvinhu zvakagadzirwa zvekugadzirira asidhi.
2) Kugadzirwa kwechikafu
Mukugadzirisa chikafu, ndiyo imwe yeanoshandiswa zvakanyanya kusunungura mumiririri, anoshandiswa mukugadzira mabhisikiti, chingwa uye zvichingodaro, ndiyo kabhoni dhayokisaidhi mune zvinwiwa zve soda; Inogona kuverengerwa nealum alkaline yekubheka poda, uye inogona zvakare kusanganiswa nesoda soda yehurumende caustic soda. Inogona zvakare kushandiswa sekuchengetedza bhata.
3) Midziyo yemoto
Inoshandiswa mukugadzira acid uye alkali fire extinguisher uye foam fire extinguisher.
4) Rubha indasitiri inogona kushandiswa kurabha, chipanje kugadzirwa;
5) Metallurgical indasitiri inogona kushandiswa sekuyerera kwekukanda simbi ingots;
6) Mechiniki indasitiri inogona kushandiswa simbi yakakandwa (foundry) jecha kuumbwa vanobatsirwa;
7) Kudhinda uye yekudhiza indasitiri inogona kushandiswa seye dhayi yekudhinda inogadzira mumiriri, asidhi uye alkali buffer, jira kudhaya uye kupedzisa yekumashure kurapwa mumiririri;
8) Textile Indasitiri, kubheka pasoda inowedzerwa kune yekudhina maitiro ekudzivirira shinda dhiramu kubva kuburitsa maruva marara.
9) MukurimaI, inogona zvakare kushandiswa senzira yekushambidza mvere uye nekunyudza mbeu.
Kubhadhara & Shipment
Nguva Yekubhadhara: TT, LC kana nekutaurirana
Chiteshi cheKutakura: Qingdao Chiteshi, China
Lead nguva: 10-30days mushure mekusimbisa iyo odha
Primary Kukwikwidzana Makomborero
Diki Oders Yakagamuchirwa Sampuli Inowanikwa
Distributorships Inopa Mukurumbira
Mutengo Wemukati Kukurumidza Kutakura
Yenyika Dzakabvumidzwa Guarantee / Warranty
Nyika Yekutangira, CO / Fomu A / Fomu E / Fomu F ...
Iva nemakore anopfuura gumi nemashanu ruzivo rwehunyanzvi mukugadzirwa kweSodium Bicarbonate;
Unogona gadzirisa kurongedza maererano nezvaidiwa wako; Kuchengetedza chinhu chejumbo bhegi ndi5: 1;
Diki rekuyedza odhi inogamuchirwa, yemahara sampuro inowanikwa;
Ipa inonzwisisika misika kuongororwa uye zvigadzirwa mhinduro;
Kupa vatengi mutengo unokwikwidza kwazvo panguva ipi neipi;
Yakaderera kugadzirwa kwemitengo nekuda kwemuno zviwanikwa zviwanikwa uye zvakaderera zvekufambisa mutengo
nekuda kwekuswedera padoko, chengetedza mutengo wekukwikwidza
Nyaya dzinoda kutariswa
Sarudza nzvimbo yakasviba inodonha uye ganhurira kupinda Zvinokurudzirwa kuti vashandi vechimbichimbi vapfeke maski yeguruva (chifukidziro chizere) uye vapfeke hembe dzebasa. Dzivisa guruva, nyatso kutsvaira, isa mumabhegi uye chinja kunzvimbo yakachengeteka. Kana paine huwandu hwakawanda hwekudonha, vhara nemapepa epurasitiki uye kanivhasi Unganidza, gadzirisazve kana kuendesa kunzvimbo yekurasa marara yekurasa.
Sodium bicarbonate ndeyezvinhu zvisina njodzi, asi inofanirwa kudzivirirwa kubva kunyorova. Soda yekubheka haifanire kusanganiswa nezvinhu zvine chepfu kudzivirira kusvibiswa.
Pashure: Mushaba Ash
Zvadaro: Sodium Metabisulphite
Tenga Sodium Carbonate
Sodium Carbonate Mutengo
Hydrosulfite, Karusiyamu Bromide Solution, Natrium Hydrosulfite, Karusiyamu Bromide Anhydrous, Karusiyamu Bromide Liquid, Hydrosulfite De Sodium,